Umaka: umbhalo | Martech Zone
NgoMsombuluko, Februwari 29, 2016 NgeSonto, ngoFebhuwari 28, 2016 Douglas Karr
Esikhathini esingengakanani esidlule sibe nengxoxo emnandi noDaniel Lemin, umbhali weManipuRATED: How Business Owners Can Fight Fraudulent Online Ratings and Reviews. Ukhulume ngokubaluleka kokuthwebula izibuyekezo ukuze ube nokubuyekezwa okusha nokulwa nanoma yikuphi ukubuyekezwa okungalungile okungavela ngezikhathi ezithile. Ingabe kunesikhathi esingcono sokuthatha isibuyekezo esihle kunangemuva nje kokuthi ikhasimende elinelisekile lishiye ibhizinisi lakho? Mhlawumbe hhayi - ngakho kungani kungenjalo
NgoLwesibili, Okthoba 21, 2014 Douglas Karr
Iwebhu ngokungangabazeki iyinsiza esemqoka yolwazi yazo zonke izethameli futhi kubalulekile ukuqinisekisa ukuthi iyasebenza futhi inamandla ukuze abantu namabhizinisi balwele. Inguquko yedijithali iyadingeka. Amawebhusayithi adinga ukwehluka, afanele futhi ahlanzekile futhi okuqukethwe ngokushesha kudinga ukubandakanya umfundi. Okuqukethwe kudinga ukuba bukhali, kudinga ukuphoqa futhi kudinga ukucaca. Akukona okokugcina; imayelana nokuhola
Kunesizathu esenza sisebenzise izithombe ezingaka lapha Martech Zone… kuyasebenza. Ngenkathi okuqukethwe okubhaliwe kugxilwe kukho, isithombe silinganisela amakhasi futhi sinikeze izindlela zabafundi ukuthola umbono osheshayo walokho okuzayo. Izithombe kuyisu elingaphansi uma kukhulunywa ngokuthuthukisa okuqukethwe kwakho. Uma ungakenzi lokho - zama ukunikeza isithombe sayo yonke imibhalo, ukuthumela noma ikhasi ku-
U-Adam Teece une-blog esendleleni efanele. Ekuhlaziyeni i-HTML yakhe eluhlaza, uyazi ukuthi ubelalele izeluleko eziningi ezinhle - ngethemba lapha :). Amathiphu Wakho WeBhulogi Okuthunyelwe kwakho okuyinhloko kungena kugobolondo lakho eseceleni. Uma uthola ukuthi uma ulungisa i-div yakho eyinhloko iye ku-480px ku-Stylesheet yakho, inikeza ibhalansi yesikhala esimhlophe ngakwesokunxele nangakwesokudla kokuthunyelwe kwakho, okwenza kube lula kakhulu